UWilliam Sturgeon, uMvelisi we-Electromagnet
I-electromagnet iyisisombululo esenziwa yintsimi yamagnetic ngogesi wamandla.
Injini yombane waseBrithani uWilliam Sturgeon, owayesakuba yindoda eqala ukudibana kwizenzululwazi eneminyaka engama-37 ubudala, wasungula i-electromagnet ngo-1825. Isixhobo se-Sturgeon safika emva nje kweminyaka emihlanu emva kokuba isazi senzululwazi saseDanish sifike ukuba umbane uvelise amaza emandla . I-Sturgeon yazibandakanya le ngcamango kwaye yabonisa ngokucacileyo ukuba namandla okombane, amandla anamandla amakhulu.
I-electromagnet yokuqala eyakhayo yayiyinxalenye yensimbi eyenziwe ngamahashe eyayisongwe ngekhoyili yecala ephihliweyo. Xa okwangoku kwagqitywa ngekhoyili i-electromagnet yaba magnetized, kwaye xa i-current ishiyiwe, ikhoyili yayiyi-magnetized. I-Sturgeon ibonise amandla ayo ngokuphakamisa iipounds ezilishumi elinesixhenxe ngesinyithi esinezixhobo ezifakwe ngetambo apho i-batri yebhetri enye ithunyelwe khona.
I-Sturgeon inokulawula i-electromagnet yakhe-oko kukuthi, insimu yamagnetic ingatshintshiswa ngokulungiswa kwamanje kagesi. Oku kwakuqala ukusetyenziswa kwamandla kagesi ukwenzela ukusetyenziswa koomatshini abasebenzisekayo nokulawulayo kwaye wabeka iziseko zokunxibelelana ngekhompyutha ngobukhulu.
Kwiminyaka emihlanu kamva umvelisi waseMelika ogama linguJoseph Henry (1797-1878) wenza inguqu ephezulu kakhulu ye-electromagnet. UHenry wabonisa ukusetyenziswa kwefowuni yeSturgeon ukukhulumisana kwexesha elide ngokuthumela i-electronic current ngaphezu kweyure enye yefowuni ukuze kusebenze i-electromagnet eyabangela insimbi ukuba ibetha.
Ngaloo ndlela i-telegraph yombane yazalwa.
Emva kokuphumelela kwakhe, uWilliam Sturgeon wafundisa, wafunda, wabhala waza waqhubeka ezama. Ngomnyaka we-1832, wayakhe umbane wamandla kwaye waqulunqa umqhubi, inxalenye ebalulekileyo yamanjini kagesi anamhlanje, evumela ukuba kwangoku iguqulwe ukusiza ukudala i-torque.
Ngomnyaka we-1836 wasungula iphephancwadi elithi "Annals of Electricity," wakhupha uMbutho weMandla waseLondon, waza waqulunqa i-coil galvanometer ye- coil yokumisa iifowuni zombane.
Wathuthela eManchester ngo-1840 ukuya kuVictoria Gallery yeScience Practical. Le projekthi yahluleka iminyaka emine kamva, kwaye ukususela ngelo xesha, wenza uqeqesho lwakhe lokuphila nokunikela imiboniso. Kwindoda enika inzululwazi kakhulu, ngokusobala wayifumana imali encinane. Kwimpilo embi kunye nemali encinane, wachitha iintsuku zakhe zokugqibela kwiimeko ezinzima. Wafa ngo-4 Disemba 1850 e-Manchester.
I-Tyrannosaurus Rex yafunyanwa njani?
Ukumisa Ukuhlaziya kuma-1990
Imidlalo yeBiology kunye nemibuzo
Isingeniso kwiTarot: Isikhokelo soSifundo seNqanaba lesi-6
AmaJamani ukuya eMelika